रगत प्रकार १०१: तपाईंको रगतको प्रकारले तपाईंको स्वास्थ्यको लागि के अर्थ राख्छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय घरपालुवा जनावर खेलहरु चेकआउट भारी खेल कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य समुदाय, कम्पनी प्रेस कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईंको रगतको प्रकारले तपाईंको स्वास्थ्यको लागि के अर्थ राख्छ?
यदि तपाइँ आफ्नो रगतको बारेमा सबै जान्नुहुन्छ कि रातो छ भने, तपाइँसँग केहि गर्न को लागी गर्न छ।
रगत विभिन्न अवयवहरूको एक धेरै बाट बनेको हुन्छ। त्यहाँ रातो र सेतो रक्त कोषहरू छन्, जसले क्रमशः अक्सिजन बोक्छ र संक्रमण लड्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ प्लेटलेटहरू छन्, जसले तपाईंको रगत क्लोट गर्न सहयोग गर्दछ। र त्यहाँ प्लाज्मा छ, जसले पोषण र हर्मोनहरू जस्ता चीजहरूको साथ शरीर प्रदान गर्दछ। तपाईंको प्लाज्मामा एन्टिबडीहरू समावेश छन्, जुन पदार्थहरू तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीले जीवाणु र ब्याक्टेरियाजस्ता विदेशी आक्रमणकारीहरूसँग लड्न प्रयोग गर्दछ।
तपाईको रगतमा एन्टीजेन्स पनि हुन्छ। यी प्रोटीन र अन्य अणुहरू छन् जुन तपाईंको रातो रक्त कोशिकाको बाहिरी भागमा हुन्छन्; तपाईको रगत कस्तो प्रकारको हो भनेर निर्धारण गर्दछ। रगतलाई यसको रेशस कारक (उर्फ, आरएच कारक) द्वारा वर्गीकृत गरिएको छ। यदि तपाईंको रगतमा आरएच डी कारक छ - सबैभन्दा प्रचलित र आरएच कारकहरू मध्येको महत्वपूर्ण हो - तपाईं एक सकारात्मक रक्त प्रकार हो। यदि तपाईंको रगतमा अभाव छ भने, तपाईं एक नकारात्मक रक्त प्रकार छ।
रगतको प्रकार अनुसार रगत वर्गीकरण गर्नु रक्तक्षेपण जस्ता चीजहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, जसले शल्यक्रिया, दुर्घटनाहरू, र रक्तस्राव विकारहरूको माध्यमबाट हराएको रगतलाई प्रतिस्थापन गर्दछ। एक प्रकारको रगतको मिश्रण गर्नु जुन अर्कोसँग नमिल्ने हो - एन्टिजेन्स र आरएच कारक जस्ता चीजहरूको लागि धन्यवाद - घातक हुन सक्छ।
कहिले सम्म vyvanse को 40mg अन्तिम हुन्छ
स्वस्थ जीवनको लागि स्वस्थ रगत आवश्यक छ। टाइपबाट ट्रान्सफ्यूजिंग सम्म, यहाँ तपाईलाई आफ्नो रगत र स्वास्थ्यको बारेमा जान्नु आवश्यक छ।
त्यहाँ कतिवटा रक्त प्रकारहरू छन्?
धेरै व्यक्तिको आठमध्ये एक रक्त प्रकार हुन्छ। फेरि, रगतका प्रकारहरू तपाईको रक्त कोषहरूमा पाइने एन्टिजेन्स (वा ती मध्ये कमी) मा आधारित हुन्छन् र तपाईको रगतमा Rh D कारक हुन्छ वा हुँदैन। एबीओ रक्त समूह प्रणाली अनुसार रक्त टाइप गरिएको छ। यदि तपाईंको रगतमा एन्टीजेन्स छ भने, तपाईंसँग ए रक्त प्रकार छ। यदि तपाइँसँग बी एन्टिजेन्स छ भने, तपाइँसँग बी रक्त प्रकार छ। केहि मानिसहरुमा ए र बी दुवै एन्टिजेन्स हुन्छ, तिनीहरूलाई एबी रगत दिईन्छ। र ओ रक्त प्रकारको व्यक्तिसँग न ए वा बी एन्टिजेन्स हुन्छ।
ती प्रत्येक प्रकारका थप तिनीहरूका Rh कारकको आधारमा बिच्छेद भइसकेका छन्। उदाहरण को लागी, केहि मानिसहरु लाई एक सकरात्मक रगत हुन्छ जबकि अरुहरुको नकारात्मक हुन्छ। धेरै थोरै मानिसहरूसँग Rh नल रगत पनि भनिन्छ (जसलाई सुनको रगत पनि भनिन्छ), यसको मतलब यसको कुनै Rh कारक छैन। यो अत्यन्त दुर्लभ छ, विश्वभरि केवल मुठीभर व्यक्तिहरूमा देखा पर्दछ।
रगतको प्रकार कति सामान्य वा दुर्लभ हुन्छ जाति, जातीय पृष्ठभूमि, र तपाइँ विश्वको कुन भागमा बस्नुहुन्छ फरक छ। पुस्तक अनुसार रक्त समूह र रातो कोष एन्टिजेन्स , रक्त प्रकार बी एसियाका मानिसहरूमा सामान्य हुन्छ र रक्त प्रकार ए मध्य र पूर्वी यूरोपमा सामान्य हुन्छ। संयुक्त राज्य र पश्चिमी यूरोपमा, ओ धनात्मक सबैभन्दा सामान्य रक्त प्रकार हो किनभने एक सकारात्मक आरएच कारक रहेको छ। एबी नकारात्मक यो दुर्लभ हो। बाँकी रगतका प्रकारहरू नि? को स्ट्यानफोर्ड रक्त केन्द्र यी तथ्या .्कहरू प्रदान गर्दछ।
रगतको समूह रक्त प्रकारको अमेरिकीहरूको प्रतिशत
O + .4 37.%%
A + .7 35..7%
B + .5.%%
एबी + 4.4%
मेरो रगत के हो?
तपाईको रगत प्रकार तपाईको आमा बुबाबाट प्राप्त भएको छ - र तपाई यसलाई आफ्नो आँखाको रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुने भन्दा बढि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न।
प्रत्येक अभिभावकले बच्चाको रगतमा एक दुई, A, B, वा O alleles (जीनको एक रूप) लाई योगदान गर्दछ। ओ एलेलेलाई बिभिन्न मानिन्छ, यसको मतलब यो सधैं व्यक्त हुँदैन। त्यसोभए यदि ओओ एलेल्स भएको एउटी आइमाईको बच्चा छ जसको बीबी एलिस छ भने बच्चाको बी बी प्रकार हुन्छ।
के बच्चाले रगतको प्रकार आफ्ना बाबुआमा भन्दा फरक हुन सक्छ? यो पक्कै पनि सम्भव छ, भन्छ देवा शर्मा , एमडी, एमएस, नेशभिल, टेन्नेको भान्डर्बिल्ट विश्वविद्यालय मेडिकल सेन्टरमा हेमेटोलॉजिस्ट-एन्कोलॉजिस्ट। उदाहरणका लागि, एक AO आमाको रक्त प्रकार A हुन्छ, र एक BO बुबाको रक्त प्रकार बी हुन्छ। यद्यपि, उनीहरूमा २ 25% सम्भावना छ रगत प्रकार ओ (ओओ लेलिसको उत्तराधिकारको साथ) र बच्चाको २ chance% सम्भव हुने बच्चाको साथ एबी रक्त प्रकार हुन सक्छ (आमाबाट एलेलीको अधिकार र बुबाबाट बी लेले )।
अरू कुन संयोजनहरू हुन सक्छन्? Emory विश्वविद्यालय स्कूल स्कूल यो चार्ट सँगै राख्नुहोस्:
अभिभावक # 1 को एलीलहरू अभिभावक #2को एलीलहरू बच्चाको रक्त प्रकार
AA वा AO (प्रकार A) AA वा AO (प्रकार A) A वा O टाइप गर्नुहोस्
AA वा AO (प्रकार A) बीबी वा बीओ (प्रकार बी) A, B, AB, वा O टाइप गर्नुहोस्
AA वा AO (प्रकार A) एबी (प्रकार एबी) A, B, वा AB टाइप गर्नुहोस्
AA वा AO (प्रकार A) हो (प्रकार ओ) A वा O टाइप गर्नुहोस्
बीबी वा बीओ (प्रकार बी) बीबी वा बीओ (प्रकार बी) B वा O टाइप गर्नुहोस्
बीबी वा बीओ (प्रकार बी) एबी (प्रकार एबी) B, A वा AB टाइप गर्नुहोस्
बीबी वा बीओ (प्रकार बी) हो (प्रकार ओ) B वा O टाइप गर्नुहोस्
एबी (प्रकार एबी) एबी (प्रकार एबी) A, B, वा AB टाइप गर्नुहोस्
एबी (प्रकार एबी) हो (प्रकार ओ) A वा B टाइप गर्नुहोस्
हो (प्रकार ओ) हो (प्रकार ओ) प्रकार O
तपाईको आरएच कारक पनि विरासतमा आयो र तपाईको रगतको प्रकार जस्तै तपाईले पनि प्रत्येक अभिभावकबाट दुई आरएच एलले पाउनु भयो। त्यसैले प्रत्येक आमा बुबाबाट एक आरएच पॉजिटिव एलील प्राप्त गर्ने बच्चा आरएच पॉजिटिभ हुनेछ, र प्रत्येक अभिभावकबाट एक नकारात्मक आरएच एलिल प्राप्त गर्ने आरएच नकारात्मक हुनेछ। यदि तपाईंसँग एक धनात्मक र एक नकारात्मक आरएच एलेले छ (तपाईंलाई आरएच पॉजिटिभ बनाउँदै, आरएच नकारात्मक एलेले प्रभावशाली हुन सक्दैन), तपाईं या त एउटा सानो बच्चालाई दिन सक्नुहुनेछ। तपाईंको बच्चा आरएच पॉजिटिभ हुनेछ वा नकारात्मक अन्य आमा बुबाले द्वारा पारित गरेकोमा निर्भर हुन्छ।
म कसरी मेरो रगतको प्रकार पत्ता लगाउन सक्छु?
त्यहाँ तीन तरिकाहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो रक्त प्रकार पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले रक्त प्रकारको परीक्षणको अर्डर गर्न सक्दछन्।
तपाईं रगत दान गर्न सक्नुहुन्छ। एक टाइपिंग परीक्षण गरिनेछ र नतीजा तपाईलाई पठाइनेछ।
तपाईं एक घर मा रक्त टाइप परीक्षण खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। यी परीक्षणहरूमा सामान्यतया तपाइँको औंलाको चुचोल्नु र रसायनिक उपचार गरिएको कार्डमा रगतको एक थोपा राख्नु समावेश हुन्छ जुन एन्टिजेन्स र आरएच कारकको खोजी गर्दछ। त्यसो भए तपाईले कार्डमा जे देख्नुहुन्छ त्यो प्रदान गरिएको गाईडमा मिल्छ। अन्य परीक्षणहरूमा लार नमूना समावेश हुन सक्छ।
यद्यपि यी परीक्षाहरू मूर्ख छैनन्। त्यहाँ केहि परिदृश्य छन् जसमा हामी रगत टाइप गर्नेमा भिन्नता पाउँछौं, डा शर्मा भन्छन्। यो रगत क्यान्सर भएको व्यक्तिमा देखा पर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, वा हालसालै रक्त ट्रान्सफ्यूजन वा स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट भएको कोहीमा।
कुन रक्त प्रकारहरू रक्तक्षेपणका लागि उपयुक्त छ?
जबकि यो काउन्टरट्युटिभ जस्तो देखिन्छ, रगतको प्रकार थाहा पाउनु एकदम आलोचनात्मक हुँदैन। अचम्मको कुरा, धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनको रगतको प्रकारलाई नबुझीकन उनीहरूको जीवनलाई पार गर्दछन् र यसले उनीहरूलाई कुनै नोक्सान गर्दैन, भन्छन् जेरी ई। स्क्वायरहरू , एमडी, पीएचडी, चार्ल्सटनको दक्षिण क्यारोलिनाको मेडिकल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक। किन? किनकि कुनै पनि अस्पतालले बिरामीको रगतको प्रकार निर्धारण गर्न पहिलो परीक्षणहरू बिना नै बिरामीलाई ट्रान्सफ्यूज गर्ने छैन। र, होईन, अस्पतालले बिरामीको रगतको प्रकारको शब्द लिदैन। मलाई थाहा छ कि म रगत समूह A, तर मलाई रगत चाहिएको छ भने, मेरो प्रकार निश्चित गर्न पहिले परीक्षणहरू गरिनु पर्ने हुन्छ र ती सुरक्षित रातो रक्त कोशिका युनिटहरू मेरो रक्तक्षेपणको लागि छनौट गरिन्छ।
एक प्रकारको रगतको साथ ट्रान्सफ्यूज हुनु तपाईको साथ नमिल्ने घातक हुन सक्छ। यो किनभने बाहिरी रगतमा एन्टिबडीहरूले यसको विरूद्ध आक्रमण गर्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न सक्दछ, समस्याहरूको झगडा उत्पन्न गर्दछ। कुन रगतका प्रकारहरू उपयुक्त छन् र कुन चाहिँ होइनन्? यस अनुसार स्मारक रक्त केन्द्रहरू , सुरक्षित संयोजनहरूले समावेश गर्दछ:
रगतको समूह लाई रक्तदान गर्न सक्छ बाट रगत प्राप्त गर्न सक्छ
TO- A-, A +, AB-, AB + लाई-
B + बी +, एबी + B +, B-, O +, O-
एबी + एबी + AB +, AB-, A +, A-, B +, B-, O +, O-
के हुन्छ यदि तपाईं आपतकालमा हुनुहुन्छ रगत प्रकारको परीक्षणको लागि समय नै छैन? तपाईंले रगत प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुनै एन्टीजेन्स वा आरएच डी कारक बिना, ओ-रगत सबै अन्य रक्त प्रकारहरूसँग उपयुक्त छ। यस कारणले गर्दा O- रगत भएका मानिसहरूलाई विश्वव्यापी दाता भनिन्छ।
यस अनुसार अमेरिकी रेड क्रस , यस देशमा प्रत्येक दुई सेकेन्डमा कसैलाई रक्तक्षेपण आवश्यक छ। त्यो बनाउँछ रक्तदान विशेष गरी आलोचनात्मक। यदि तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ भने, कृपया रगत दाता बन्नुहोस्, डा। स्क्वाइर्स आग्रह गर्दछ। रगतको कुनै विकल्प छैन, र यदि मानिसहरूले दान दिएन भने हामी भाग्नेछौं। यसको मतलब शल्यक्रिया, कुनै ट्रान्सप्लान्ट, र ट्रामासको लागि कुनै उपचार छैन।
मेरो रगतको प्रकारले मेरो स्वास्थ्यको बारेमा के भन्छ?
के तपाईंको रक्त प्रकारले तपाईंलाई केही रोगहरूको खतरामा पार्न सक्छ? जबकि केही विज्ञहरू भन्छन् कि स्वास्थ्यमा रगतको प्रकारको कुनै पनि प्रभाव खेल्छ उत्तममा नगण्य छ, अरूले भने कि त्यहाँ एक वैध कनेक्शन छ।
डा। शर्मा भन्छन्, हाम्रो रगतको प्रकारको एबीओ एन्टिजेन्स केवल रातो रक्त कोशिकाको सतहमा मात्र अभिव्यक्त हुँदैन, तर ती मानव अues्गमा पनि हुन्छन्, डा शर्मा भन्छन्। यसले एबीओ रक्त प्रकारलाई रगत प्रणाली भन्दा बाहिरका विभिन्न स्वास्थ्य परिणामहरूको लागि नैदानिक ​​महत्त्वको लागि आधार प्रदान गर्दछ।
ती स्वास्थ्य परिणामहरू के के हुन सक्छ? यस अनुसार उत्तर पश्चिमी चिकित्सा , अध्ययनहरूले देखाउँदछ:
O प्रकारको मानिस रगतमा मुटुको रोगको सब भन्दा कम जोखिम हुन्छ जबकि बी र एबी भएका मानिसहरूमा बढी हुन्छ।
A र AB भएका व्यक्तिहरू रगतमा पेटको क्यान्सरको दर उच्च हुन्छ।
प्रकार A रगतका मानिस प्रबन्धन गर्न अरु भन्दा गाह्रो समय हुन सक्छ तनाव किनभने तिनीहरू प्रायः तनाव हार्मोन कोर्टिसोलको अधिक उत्पादन गर्दछन्।
तर जब यो रगत प्रकार र COVID-19 बिरामीहरू - पलको रोग - त्यहाँ एक शुभ समाचार छ। पत्रिकामा प्रकाशित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अनुसन्धानकर्ताहरु द्वारा पछिल्लो अध्ययन अनुसार हेमेटोलजी को एनाल्स , कोरोनाभाइरसबाट बिरामी कसरी हुने भनेर रगतको प्रकारले असर पार्दैन (प्रारम्भिक दाबी हुँदाहुँदै पनि यो हुन सक्छ)।
अर्को पढ्नुहोस्: कसरी — र किन तपाई should महामारीको दौरान रगत दान दिनु पर्छ
एन्टीडिप्रेसन्ट्स: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
कति छिटो पिउने पछि तपाइँ ibuprofen लिन सक्नुहुन्छ
भिटामिन डी ३००० आईयू के को लागी प्रयोग गरिन्छ
ज्वरो ibuprofen वा acetaminophen को लागी के राम्रो छ
के कारण पोटेशियम स्तर कम हुन सक्छ